West Seattle - Walk & Roll - om Archives - Seattle Traffic
Category: West Seattle – Walk & Roll – om
Kaartaawwanii fi Leecalloowwan
Leecalloowwan dabalaa kanneeniin gamnoomaan, malee, humnaan hin imaliinaa. West Seattle and Duwamish Valley Walking Map (PDF) Dursa Lafoof Dursa Lafoof: West Seattle Trails map (PDF) Sagantaa Daandii Magariisaa Qe’ee Keessaa Bilookii keessaniif Hayyama a Stay Healthy gaafadhaa Dhimma qe’ee keessan jiru gabaasaa
Sarara Imalaa Keessan Karoorfadhaa
Tooftaalee kanneeniin, sarara imalaa imaltoota lafoof mijatoo ta’an argadhaa. Accessible Route Planner Elevation Accessibility Map
Isin hangamuu yeroo baay’ee gara Lixa Siyaatil deddeebitanis, imalawwan murtaa’an lafoo ni deemtu, stroller dhiibdu ykn wilcheeriin ni deemtu. Nuyis namoota lafoo deemanii fi haala nagaalessa ta’een sigigaatan ni deeggarra. Kunis bakkeewwan magariisaa qe’ichaa (daandiiwwan qe’ee jireenyaa cal’isoo) duruma jiran garii isaanii gara Daandii Fayyaalessatti jijjiiruun dha. Daandiiwwan Fayyaalessummaan Turan – konkolaattotaaf cufaa ta’u – […]